CARING CARDS - my - HealthServe
ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်များ (Caring Cards) အကြောင်း
ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်များ (Caring Cards)
“စိတ်” ကျန်းမာရေးအတွက် စကားပြော ဆွေးနွေးခြင်း။ ကိုယ်အလေးထား ဂရုစိုက်ရတဲ့သူ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ နောက်ဆုံးဘယ်အချိန်တုန်းက လေးလေးနက်နက် စကားပြောဆိုခဲ့လဲ?
ခန္တာကိုယ် တစ်ခုလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုအလေးထားတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းငယ်တစ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် လူမှုဆက်သွယ်ရေးဟာစိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်အရေးကြီးကြောင်း လက်ခံအသိမှတ်ပြုပါတယ်။ ဒီလိုကမ္ဘာအနှံ့ရောဂါဖြစ်ပွားနေသောကာလမှာ လူမှုဆက်သွယ်ရေးဟာ ပိုပြီး အရေးပါလာပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်များ (Caring Cards)ကို ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အလေးထား ဂရုစိုက်ရတဲ့ အခွင့်ခံနိမ့်ပါးသူတွေဖြစ်တဲ့ စကားနည်းပြီး အတွေးတွေ အများကြီးရှိတဲ့သူတွေ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်အတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့သူတွေနဲ့ စကားပြောချင်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အသံတိတ် သူရဲကောင်းများ ဖြစ်ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်များ (Caring Cards) ဘယ်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတာလဲ?
ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်များ (Caring Cards) ကိုရွှေ့ပြောင်းညီအကိုများအတွက် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့ အခြားသူတွေလဲ ဒီကတ်ေတြကို စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် စကားပြောသုံးစွဲကြဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
C – နှုတ်လုံခြင်း
သူ(သို့မဟုတ်)သူများအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမှ လွဲပြီး၊ တစ်ယောက်ယောက်ကသင်နဲ့မျှဝေထားတဲ့အရာကို နှုတ်လုံအောင်ထားပါ။
A – သိမြင်ခြင်း
လူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့ပြသနာတွေရှိသလို ရင်ဆိုင်တုံပြန်မှုလဲကွဲပြားကြပါတယ်။ ဒါကိုသိမြင်နားလည်ပေးပါ။
R – လေးစားခြင်း
E – စာနာမျှဝေခံစားခြင်း
ဂရုတစိုက်နားထောင်ခြင်း၊ တစ်ဖက်လူ၏အမြင်ကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲလက်ခံနားလည်ခြင်းဖြင့် စာနာမှုပြမျှဝေခံစားခြင်းလုပ်ပါ။
ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်များ (Caring Cards) ကတ်များကို စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်စကားပြောသုံးစွဲနိုင်ပေမဲ့၊ ဒီကတ်များကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ရဲ့ဆွေးနွေးလမ်းညွှန်ဝန်မှုနှင့်စိတ်ရောဂါခွဲခြားဆုံးဖြတ်ခြင်းများအတွက် အစားအသုံးမပြုသင့်ပါ။ မသေချာလျှင်၊ ပိုမိုလိုအပ်လျှင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ထံချဉ်းကပ်ပါ။
သင်သို့မဟုတ်သင့်သူငယ်ချင်းများ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်အကူအညီရှာဖွေနေပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျန်းမာရေးဝင်ဆောင်ရေးပရဟိတအဖွဲ့ (HealthServe) +၆၅ ၃၁၂၉ ၅၀၀၀ (၂၄ နာရီအကူအညီလိုင်း ) ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ပထမဆုံးအကြိမ်ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်များ (Caring Cards)ကို တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်စကားစပြောဖို့အတွက်အသုံးပြုနေတာ လား?
All	မိသားစု	စိတ်ခံစားချက်များ	ခင်မင်ရင်းနှီးမှုများ	မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ခြင်း	စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်သောအရာများ
၂၄ နာရီအကူအညီလိုင်း +၆၅ ၃၁၂၉ ၅၀၀၀ ကိုခေါ်ဆိုပါ (သို့မဟုတ်)
ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်များ (Caring Cards) အစုံအလင်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုပါသလား?
အပေါ်က ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်များ (Caring Cards) သုံးရတာသဘောကျပါသလား? ကတ်များရဲ့ စာရွက်ထုတ်ယူနိုင်သော ဗားရှင်းကို ဒီမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဝင်ဆောင်ရေးပရဟိတအဖွဲ့ (HealthServe) ၏မေးလ်ပို့စာရင်းတွင် စာရင်းသွင်းလိုပါသည်။
“တင်သွင်း” ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည် ကျန်းမာရေးဝင်ဆောင်ရေးပရဟိတအဖွဲ့ (HealthServe) ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထုတ်ပြန်ချက်ကို သဘောတူပါသည်။
ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်များ (Caring Cards) ကိုရွှေ့ပြောင်းညီအကိုများအတွက်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့ အခြားသူတွေလဲဒီကတ်များကိုစိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်စကားပြောသုံးစွဲကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဝင်ဆောင်ရေးပရဟိတအဖွဲ့ (HealthServe)က ဒီကတ်များကို ကျွန်တော်တို့ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားလူအုပ်စုအတွက်ဖန်းတီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအုပ်စုက များသောအားဖြင့် အမျိုးသားများဖြစ်ပါတယ်။
သင်နှင့်စကားပြောနေသောသူက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခခံစားနေရတာသိပါက ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
၁. ၂၄ နာရီအကူအညီလိုင်း +၆၅ ၃၁၂၉ ၅၀၀၀ ကိုခေါ်ဆိုပါ (သို့မဟုတ်)
၂. ဒီမှာ ဆွေးနွေးလမ်းညွှန်စကားပြောဖို့စာရင်းသွင်းပါ။
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားမဟုတ်ပါက ဒီမှာ သင့်လျော်သောအကူအညီကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
မသိနိုင်ပါဘူး။ စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်မဟုတ်ပါကခွဲခြားဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြု သင့်ပါ။ လိုအပ်ပါကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ထံချဉ်းကပ်ပါ။
ကျန်းမာရေးဝင်ဆောင်ရေးပရဟိတအဖွဲ့ (HealthServe)အနေဖြင့် ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေတဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွေကို သူတိုတွေမပါပဲ ဒီပရောဂျက်တွေမဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုချင်ပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ရှိရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများရဲ့ ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခြင်း နှင့်မျှော်လင့်ချက်များ ရှင်သန်နိုင်အောင်လို့ စေတနာကောင်းနဲ့ ကူညီပေးခြင်းနှင့် ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ပေးဆပ်ခြင်းတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားသူငယ်ချင်းများ – ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်များ (Caring Cards) များဖန်တီးဖို့အတွက် ကွင်းဆင်းစရင်းကောက်ယူချိန်အတွင်းသူတို့ရဲ့တန်းဖိုးရှိမျှဝေအတွေးခံစားချက်များ
ကျန်းမာရေးဝင်ဆောင်ရေးပရဟိတအဖွဲ့ (HealthServe) ရဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်အလုပ်သင်များ – ဒီပရောဂျက်အတွက် ကျန်းမာရေးဝင်ဆောင်ရေးပရဟိတအဖွဲ့ (HealthServe) ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆွေးနွေးလမ်းညွှန်ဝန်ဆောင်မှုအသင်း (Mental Health & Counselling Services) နှင့်အတူတူသူတို့ရဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုများ
အတိုင်ပင်ခံစိတ်ရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေးဝင်ဆောင်ရေးပရဟိတအဖွဲ့ (HealthServe) ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာချန်လိုင်ဂွမ် (Dr. Chan Lai Gwen) – ဒီပရောဂျက်အတွက်သူမရဲ့လမ်းညွှန်မှုများ